Kika Emoji Keyboard Review APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း APK ကို
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အန်းဒရွိုက်ယင်း၏အသုံးပြုသူများပူဇော်နိုင်မတဦးတည်းအရာလည်းမရှိဆိုပါက Play Store မှာစာရင်းဝင်သောတစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားအတွက် apps များကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးသောသူတို့ကိုတို့တွင်ကီးဘုတ် app များကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလိုအပ်ချက်များကိုနောက်ဆုံးပေါ်အရာအဖြစ်ကောင်းစွာအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောပေမယ့်ပျော်စရာမသာစာရိုက်စေသည်တဲ့စမတ်အီမိုဂျီကီးဘုတ်နှင့်အတူဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရရန် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုဖြစ်ပါတယ်။
1200 + ကွဲပြားခြားနားသောအီမိုဂျီကျနော်တို့ဂုဏ်ယူစွာပွောနိုငျပါဝင်သည်နှင့်အတူ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို built-in အီမိုဂျီထောက်ခံမှုရှိသည်မှာ Android ဟာ keyboard ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ကဒီကီးဘုတ်ကြိုးစားရန်အသစ်သောအသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်သောအရာ 150 + ဒီကီးဘုတ်ပင်ပိုမိုအသုံးဝင်စေလိမ့်မည်ဟုဘာသာစကားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော plug-ins များကိုထောက်ခံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ အကြောင်းပြချက်များအတွက်, Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုမရရှိနိုင်ပိုပြည့်စုံအီမိုဂျီကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်အရာကိုဒီ app ကိုလူအစုအဝေးထဲကရပ်ကအီမိုဂျီချက်ယင်း၏အသုံးပြုသူများအတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု မှစ. သင်ပေးထားသောယခုအချိန်တွင်ခံစားရအတိအကျဘယ်လိုပြလတံ့သောလက်ျာအီမိုဂျီရှာတွေ့အခက်အခဲများရင်ဆိုင်ရဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
စတင်ရေးသားရန်နိုင်ရန်အတွက်, သင် Play Store တွင်အခမဲ့ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်, သင် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်, နှင့်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဒီ app ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်မီသင် setup ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတဆင့်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျသေချာဘို့အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိပါလိမ့်မယ်ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကို Android ပေါ်မှာ Third-party app ကို install လုပ်ထားကြပါပြီလျှင် setup ကိုတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အညီ, သင်တစ်ဦးပြည့်စုံအစပြုသူများမှာတောင်မှ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို၎င်း၏ရိုးရှင်းသော setup ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူမီနိုင်တဲ့။ သငျသညျသစ်ကိုကီးဘုတ်သုံးပြီးအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သငျသညျသစ်ကိုကီးဘုတ် enable လုပ်ဖို့ပြီးတော့ Kika Keyboard ကိုပြောင်းရန်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏အသစ်ကကီးဘုတ်ပြောင်းရန်ပြီးတာနဲ့သင်ကကွဲပြားခြားနားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတစ်ဦးစုဆောင်းမှုရှာတှေ့နိုငျတဲ့ home page ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။
သငျသညျမှပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဒုတိယ tab ကိုသငျသညျ themes များတစည်းထဲကနေရှေးခယျြဖို့ရှိသည်ရှိရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏အသစ်ကကီးဘုတ်အတွက်နှငျ့သငျအဖြစ်ကောင်းစွာကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အစီအစဉ်များနှင့်နောက်ခံကနေရှေးခယျြနိုငျတစ်ချိန်တည်းမှာရှေးခယျြနိုငျကွဲပြားခြားနားသောအရေခွံရှိပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ကောင်းသောသတင်းကိုသင်အကောင်းဆုံးသင့်စိတ်ကြိုက်ကိုက်ညီသောဆောင်ပုဒ်ကိုရှာဖွေအမျိုးအစားမှတဆင့်ရှာဖွေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့သင့်ရဲ့ themes များစီမံခန့်ခွဲနိုင်မည့်အဓိက Themes စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရေပေါ် action ခလုတ်တစ်ခုအားသာချက်ယူနိုင်တယ်, ဥပမာအားဖြင့်, သင်ပြီးသား installed ဘူးသောသူမြား၏စာရငျးကိုကြည့်ပါ။ ဤသည်မှာကီးဘုတ်ကိုလည်းသင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်ဖန်တီးပင်ပိုကောင်းက Android အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တတိယ tab ကိုဖြစ်ကောင်းအများအပြားအသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်သင်တန်း၏အီမိုဂျီ tab ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းကဒီမှာမျှော်လင့်သောအရာကိုသိကြပေမယ့်အငြင်းအခုန်များဘို့အလိုငှါငါတို့သည်နောက်တဖန်အီမိုဂျီအများကြီးနဲ့စာရေးတံသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ သို့သော်ရှိသမျှသောမက, သင်ဒါအီမိုဂျီကိုသင်ကွဲပြားခြားနားပေါ်လာပါလိမ့်မယ် install နိုငျသောကွဲပြားခြားနားသောအီမိုဂျီအရေခွံရှိပါတယ်။ သင်သည်ဤအချက်မှာမှရွေးချယ်နိုင်သော 19 ကွဲပြားခြားနားသောအရေခွံတစ်ဦးစုစုပေါင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပြီးသား installed သောအီမိုဂျီအရေခွံစီမံခန့်ခွဲပေးတယ်တဲ့စာမကျြနှာသငျသညျယူနိုင်ပါတယ်ကတည်းကအဆိုပါရေပေါ် action ခလုတ်သင်တို့အဘို့အရာတို့ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီ feature ကိုကျေးဇူးတင်သင်အလွယ်တကူသင်ကြိုက်နှစ်သက်သူအပေါင်းတို့ကိုအရေခွံများ၏စာရင်းချကျဉ်းမြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Next ကိုငါတို့အမျိုးအစားအားဖြင့်ကီးဘုတ် themes များ browse ကိုကူညီပေးပါသောအခနျးကဏ်ဍ tab ကိုရှိသည်။ တစ်ဦးချင်းအမျိုးအစားအပေါ်ကိုအသာပုတ်နှင့်သင်သည်ထိုအုပ်စုအပေါငျးတို့သ themes များတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပိုအဘယ်အရာကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်စက်ဝိုင်းမှတဆင့်သင်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သထားသောအရောင် feature သောလက်ကွက်ကိုပြသပါလိမ့်မည်ပေးထားသောအရောင်ကိုရွေးပါတခါပွတ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
သင်ဒီမှာညှိနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အရာကတော့ဖောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့နေပါစေသင်အမှန်တကယ်ရှေးခယျြသောအရာကိုဖောင်ကြောင့်ဿုံဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူရောနှောနေခြင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဦးစားပေးအညီကီးဘုတ်စိတ်ကြိုက်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။
ကျနော်တို့သင်အလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်နိုငျကွောငျးအများအပြား features တွေဖော်ပြခဲ့တဲ့သိရပေမယ့်ဘယ်မှာကအားလုံးကိုစွန်းတိုင်အောင်ဒီမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအစတန်ဖိုးထားအံ့သောငှါနောက်ထပ်အရာသငျသညျအသီးအသီး key ကိုစာနယ်ဇင်းများအတွက်အသံပြောင်းပေးဖို့ခွင့်ပြုသော tab ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာဒီပွိုင့်မှာရရှိနိုင်အများအပြားအသံမဟုတ်ပေမယ့်သင့်ထံမှရှေးခယျြနိုငျရွေးချယ်စရာအနည်းဆုံးစုံတွဲရှိသည်ဖို့အမြဲကောင်းလှ၏။ ဒီ tab ကိုလည်းသင်သင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာ install လုပ်ထားပြီကွဲပြားခြားနားသောအသံများကိုစီမံခန့်ခွဲချင်အခါတိုင်းသင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တဲ့ floating tab ကိုခလုတ်ပါရှိပါတယ်။
Kikka ယင်း၏အသုံးပြုသူများကမ်းလှမ်းကြောင်းတစ်ကယ့်ကိုအေးမြအင်္ဂါရပ်စမတ်စတစ်ကာများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာညာဘက်ထိပ်ထောင့်၌သငျအခြို့သောစကားများရိုက်ထည့်အခါတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင် "LOL" အလွန်ကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်တစ်ခုအတိုကောက်ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာ,, သင်ကအကြံပြုချက်အဖြစ်ရယ်မောလူစတစ်ကာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
app ကို UI ကို၏အောက်ခြေတွင်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအသုံးဝင်သောရှာတှေ့နိုငျနှစ်ခုအညွှန်းခလုတ်ရှိပါတယ်။ လက်ဝဲပေါ်တွင်တဦးတည်းအပေါငျးတို့သစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာရှိပြီးညာဖက်အပေါ်တဦးတည်းရှိ "Settings" ဖြစ်သော "ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်" ဖြစ်ပါတယ်။ သင် setting များကိုခလုတ်ကိုထိပုတ်ပြီးတာနဲ့သင်သည်သင်၏ကီးဘုတ်အတွက်အချို့သောယေဘုယျ setting ကိုရှာတွေ့လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာဘာသာစကားအတွက် settings နိုင်ပါတယ်။ 150 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများထက်ပိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားပါဝင်သည်နှင့်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်သင် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်သင်အဘို့အပါဆုံးသင့်လျော်သောခံစားရတယ်ဘာသာစကားကိုသုံးနိုငျကွောငျးကိုအကြီးအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။
ကီးဘုတ်သုံးပြီးပြီးနောက်သင်လိုအပ်ချက် fit မှညှိနိုင်ပါတယ်နှင့်သင့်တပြင်လုံးကိုအတှေ့အကွုံကိုတောင်ပိုကောင်းအောင်အချို့အခြားအရာရှိပါတယ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုသုံးတဲ့အခါကနေရှေးခယျြနိုငျ themes များနှင့်စတိုင်များ၏ဝန်ရှိပါတယ်သော်လည်းဒီ app ကိုလည်း floating action ခလုတ်များ၏အကူအညီဖြင့်, တဖန်, အလွန်လွယ်ကူစွာသင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ဖန်တီးစိတ်ကြိုက်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်အရာတစျခုကီးဘုတ်များ၏အပြင်အဆင်သည်နှင့်လည်းများလွန်းအရွယ်အစားချိန်ညှိပါ။ နောက်ခံပုံများ၏ကြီးမားသောစုဆောင်းမှုထဲမှပုံရိပ်ကိုနောက်ခံထည့်သွင်းရန် option ကိုလည်းရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင် Kika နောက်ခံများ app ကို download လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှသောသူတို့အားအေးမြနောက်ခံပုံများသုံးခွင့်ရှိသည်မီ။ ငါတို့သည်သင်တို့ဒြပ်စင်၏ညာဘက်ပေါင်းစပ်တှေ့ရသည်အထိသင်ဒီမှာချင်သလောက်စမ်းသပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။
ဒါဟာ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုတစ်ဦးအပြည့်အဝပေးထားသောက Android Keyboard ကိုသည်နှင့်အီမိုဂျီက၎င်း၏အထူးဖြစ်ကြောင်းထွက်လှည့်။ သငျသညျကီးဘုတ်အသုံးပြုနေသည်နှင့်သင့်ထံမှရှေးခယျြနိုငျအများအပြားရှိပါတယ်နေချိန်မှာသင်ကမည်သည့်အချိန်တွင်အီမိုဂျီရယူနိုငျပါသညျ။
အသုံးပြုသူများနှင့်စွဲလမ်းဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့အရာ Animated GIF များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်ဖြစ်နိုင်မဆိုအသစ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကီးဘုတ်အတွက်တစ်နေရာရာရှိ featured ရှိမရှိအံ့သြနေကြသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်အလွယ်တကူတော်တော်ကြီးမြတ်ထို့အပြင်ဖြစ်သောကီးဘုတ်, အတွင်း hash tag များ အသုံးပြု. GIF များအဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
က system ထဲမှာ plug ကိုမှကြွလာသောအခါ, အသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာပြေးရှိသည်ဖို့လိုခငျြသူတို့ပေးသော plug ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အကြိုက်ဆုံးသူမြားကိုလူတို့တွင်သင်တို့ကိုစာသားသင်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုအလယ်၌ချင်တယ်ဘာမှရှာဖွေခွင့်ပြုထားရာရှာဖွေရေး plugin ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပိုမိုဖတ်ရှုချင်သောအရာအတွက်ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့တစ်ဦးကို browser window ကိုသငျသညျကိုတောင်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ app ကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲသင်လိုအပ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အတိတ်ကာလတှငျကြှနျုပျတို့အများအားဖြင့်ပေးထားသောကီးဘုတ်အတွက်တစ်ဘရောက်ဇာကိုရှာဖွေရေးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့စကားပြောဆိုမှုဆက်လက် app ကိုမှတဖန်ပြန်လာနိုင်ရန်အတွက် app ကို minimize ခဲ့ရသည်။ သင် app ကိုစတင်သုံးစွဲတစ်ချိန်ကသင်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြတင်းပေါက်တစ်ရှာဖွေရေး window ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်မည့်အဆိုပါ feature ကိုသင်၏အချိန်အများကြီးကယ်တင်မည်။ ဤသည် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုမရမယ့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်အခြား app ကို, သင်မူကားသင်၏လူများနှင့်အတူပျော်စရာချမှတ်ခြင်းစကားလက်ဆုံနေစဉ်သင်အချိန်ချွေတာကြောင့်အလွန်အစွမ်းထက် tool ကိုမှန်ကန်စေသည်။
Display ကို Kika အီမိုဂျီ Keyboard ပေါ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသော features တွေနှင့်အတူထွက်အဲဒီမှာဦးဆောင်ကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဂရိတ်စာရိုက်အတွေ့အကြုံ, ကြောက်မက်ဘွယ် features တွေအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအီမိုဂျီနှင့်ထံမှရွေးချယ်ဖို့ GIF များ, ဒီ app ကိုကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးမှသာအမှုအရာအချို့ရှိပါသည်။
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Ratings အဖွဲ့
အရှိန် (5 / 5) - Kika အီမိုဂျိကီးဘုတ်အများအပြား features တွေနှင့်အတူ powered ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းတပ်ဆင်ဆဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေး။
အကွောငျး (4 / 5) - ဒီကီးဘုတ်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးများစွာသောအကြောင်းအရာများမှကျေးဇူးတင်ပါသည်သင်အလွယ်တကူပြုလုပ်သို့သော်သင်အလိုရှိကြည့်ရှုစေနိုင်သည်။ သင်ကမ်းလှမ်းနေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်လုပ်ချင်တဲ့လမ်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုငျသောဒီဇိုင်းများအချို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
အင်္ဂါရပ်များ (5 / 5) - ကမ်းလှမ်းရန် Android အတွက်ဒီကီးဘုတ်ရှိကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပင်ပိုကောင်းစေလိမ့်မည်ဟုကွဲပြားခြားနားသော features တွေဖြစ်ကြသည်။ Kika ကိုအကောင်းဆုံး GIF ကိုထောက်ခံကြောင်း, ကွဲပြားခြားနားသောစတစ်ကာများနှင့်အီမိုဂျီရှိပါတယ်, နှင့်တိုင်းဖြည့်ဆည်းမည်ကို plug ကို ins သင်အကြိုက်ဆုံးကီးဘုတ်သုံးနေစဉ်သင်ရှိသည်လိုအပ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအား (4.5 / 5) - ရှိတယ်ကွဲပြားခြားနားသောကီးဘုတ် app များကိုများများထွက်ရှိပါတယ်သျောလညျးသငျ Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သာပိုကောင်းသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစေမည်သူတို့မည်သည့်လမ်းအတွက်ကိုသင်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသော features တွေရှိပါတယ်။
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များ
သင့်စကားဝိုင်းများမှ GIF များပေါင်းထည့်ခြင်းယနေ့ခေတ်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်နှင့် Kika သင်တို့ရှိသမျှအချိန်တိုင်းအရာထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
100 GIF များထက်ပိုမိုနှင့် 800 အီမိုဂျီထက်ပို။
ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများရရှိနိုင်ပါနှင့် WhatsApp ကိုအတွက်လည်းယူနီကုဒ်7နှင့် 8 ထောက်ခံမှု။
အခြားအကြီးအများအပြင်, ဒီကီးဘုတ်ပင်ပိုမိုအသုံးဝင်စေသောများစွာသော plug ကို ins ဖြစ်ကြသည်။
စမတ် Auto-မှန်ကန်သောသင်သည်အလွန်မြန်ဆန်စွာတစ်ဦး Message ပေးပို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, သင်စာလုံးပေါင်းအမှားများကိုစစ်ဆေးသည်ရန်အချိန်မရှိဘူးသောအခါအသင်သည်သင်၏စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုပြင်ပေးကူညီပေးပါမည်။
The Voice ဘုတ်အဖွဲ့သင်သွားလာရင်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လျှင်အခြားအကြီးအများအပြင်, သင်သည်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျရိုက်ထည့် voice မှခွင့်ပြုပါတယ်။
QWERTY ကီးဘုတ်နှင့် AZERTY ကီးဘုတ်နှစ်ဦးစလုံး။
150 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများထက်ပိုမိုထောက်ပံ့အပြင် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုလည်း Bashkir အဘိဓါန်ဘာသာစကားများ Layout ထောက်ခံပါတယ်။
အပိုဆောင်း Kika အီမိုဂျီအခမဲ့ဗားရှင်း ရရှိနိုင်
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို အသုံးပြု. ၏ Cons
အဆိုပါ Glide စာရိုက်ပိုဘာသာစကားများအင်္ဂလိပ်မသာမရရှိနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုသင်အသုံးပြုနေတဲ့စေခြင်းငှါအချို့ apps တွေနဲ့သဟဇာတမဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျဒီ app ကိုသုံးပြီးအချို့သောအခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရနေတယ်ဆိုရင်သင်အဖွဲ့သည်ဆက်သွယ်နိုင်သည်သူတို့သင်နှင့်အတူဆက်ဆံနေသောပြဿနာအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီရန်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ သင်အလွယ်တကူဒီနေရာမှာသူတို့ကိုရှာတှေ့နိုငျ:
Facebook မှာ: facebook.com/KikaKeyboard
Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - နောက်ဆုံးစီရင်ချက်
ရုံကလစ်ပျောက်ငါတို့မှဤမျှလောက်များစွာသော apps များနှင့်အတူကတဦးတည်းရွေးချယ်အဲဒါကိုကပ်ရန်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ ကျနော်တို့အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသော apps များ၏အဆက်မပြတ်ရှာဖွေရေး၌ရှိကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ခြင်းအချိန်ကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်အတူကပ်နေကြသည် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကိုရှာတွေ့တစ်ချိန်ကဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သေချာကြောင်းတဦးတည်းအရာရှိ၏။ ဒါကတကယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ app တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်ကသင့်ထံမှရှေးခယျြနိုငျကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဖောင့်တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဤကြောက်မက်ဘွယ် app ကိုနောက်ကွယ်မှသောအဖွဲ့သည်အဆက်မပြတ်ပြီးသားရှိပြီးသား app ကိုတိုးတက်စေနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာလုပ်ဆောင်နေသည်။
သငျသညျသငျနှငျ့အတူအလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုမဖြစ်အံ့သောငှါခြားနားသော app ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, ငါတို့ရန်သင့်အားအကြံပေးဖို့ပျော်ရွှင်နေကြသည် ဒီ app ကိုစမ်းကြည့်ပေးပါနဲ့ Download ပြုလုပ်, ဤနည်းကိုသင် Kika အီမိုဂျီ Keyboard ကို၏ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူရှာဖွေမှုကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘလော့ဂ် Kika ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်